Yakachipa Multi-inoshanda Forklift Rudzi Komposting Midziyo Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Forklift Type Composting Equipment?
Forklift Type Composting Midziyo iri ina-in-imwe yakawanda-inoshanda yekutendeuka muchina iyo inounganidza kutendeuka, transshipment, kupwanya uye kusanganisa. Inogona kushandiswa mumhepo yakashama uye mumusangano zvakare.
Chii chingaitwe neForklift Type Komposting Equipment?
Forklift Rudzi Kompost Kugadzira Machine chigadzirwa chegwaro rekambani yedu. Iyo yakakodzera iyo yekuvirisa nediki diki yemombe mupfudze, sludge uye marara, kusefa madhaka kubva kune shuga chigayo, zvakanyanya slag keke uye mashanga sawdust uye imwe organic organic.
Zvichienzaniswa neyechinyakare kutendeuka michina.
Kushanda kweForklift Type Composting Equipment
Iyo Forklift Rudzi Kompost Kugadzira Machine Inoshandiswa zvakanyanya mu organic fetiraiza chirimwa, chemubatanidzwa fetiraiza chirimwa, sludge uye marara chirimwa, horticultural purazi uye bisporus chirimwa chekuvirisa uye kubviswa kwemvura.
Forklift Type Composting Equipment Vhidhiyo Ratidziro
Forklift Type Composting Equipment Model Sarudzo
Ipa akakodzera parameter zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Pashure: Vertical Kuvira Tangi
Zvadaro: Kuzvifambisa wega Composting Turner Machine